Fotoana famakiana: 7 minitra Ny tany midadasika eropeanina dia ny loharano angano sy angano fotsiny, mahatalanjona ny endriky ny, sy vohitra izay mitana ny tsiambaratelo taloha. Manakaiky ny tanàna afovoany cosmopolitan na mitodika any ambadiky ny tendrombohitra vatolampy, tsy hita isa ny isan'ireo vohitra mahafinaritra sy mahaliana any Eropa….
Fotoana famakiana: 6 minitra Ny tranobe sy toerana mahafinaritra an'i Eropa no namboarina ho an'ny talenta an'arivony taona maro. Mandra-pahatongan'ity anio ity i Eropa dia toeran'ny antoko quintessential eo amin'izao tontolo izao. Izy io no mkah ny antoko ho an'ny mpandeha manerana izao tontolo izao toy ny bakalorea sy bakalorea…